Mashiradan waxaa markii hore lagu daabacay Wareegyada Transparency, GlassPockets barta blogka ee Abriil 11, 2019. Waxaa halkan lagu daabacaa ruqsad buuxa
Xarunta McKnight Foundation waxay ku faantaa inay ka mid tahay kooxdii hore ee aasaasiga ah ee ku soo biiray dhaqdhaqaaqa GlassPockets waxayna ka faa'iideysteen qalabkeeda iyo ilaha. Sidii GlassPockets ay uga gudubtay nambarka 100-ka aasaasiga ah ee daahfurnaanta boggeeda internetka, waxaan rabay in aan wadaagno shakhsi ahaanshaha shakhsi ahaaneed ee ku saabsanaa sida McKnight udub dhexdhexaadiso boggayaga internetka, iyo sida GlassPockets uga mid noqdeen safarkan.
Markii aan go'aansaday in dib loo eego boggayaga internetka oo ku saabsan hal sano ka hor, waxaan ogaa in jirey aqoon weyn oo aan ku dari karno dib u eegista aaladaha GlassPockets iyo content, sidaas darteed waxaan qorsheeyay wicitaan Janet Camarena, oo hogaaminaya bogga iyo dadaalka si loo dhiiri galiyo aasaas aasaasiga ah ee aasaaska. Qeybtaan cusub ee joogitaanka webkeenna, waxaan rabay in aan naqshadeeyo daahfurnaanta bilowga. GlassPockets ma aysan niyad jabin, Janet wuxuu soo jeediyay aragti waxtar leh sannadihii la soo dhaafay in la ilaaliyo wadooyinka iyo caqabadaha ay wajahayeen asxaabteenaga waddada si aan daahfurno.
Iyadoo ereyga daahfurnaanta mararka qaarkood waxay dareemaan kalgacal ahaan xarun caafimaad, Janet wuxuu sharaxay in daahfurnaan iyo furfurnaan ay awood u yeelan karaan hay'adaha iyada oo loo marayo awooda sheekada, annaguna waxaan ognahay in aasaaska uu leeyahay sheekooyin awood leh oo ku saabsan saameynta ay ku leeyihiin deeq bixiyayaashooda. Markii aan waydiiyay waxa ku saabsan mawduuca guud ee asaasiga ah in ay is xakameeyaan mudnaanshaha, waxay u taagan tahay. Waxay tiri inta badan waxay maqleysaa in hoos-u-dhacu uu u istaagi karo habka loogu dhejiyo "GlassPockets approach", oo naga hor-istaagaysa inaan aragno sheeko-xariir ahaan sida ficilka adeegga dadwaynaha, halkii ay ka ahaan lahayd mid is-adeegsanaya.
Wadahadalkani wuxuu ii xaqiijiyay mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee asaasiga ah ee asaasiga ah: marka dadweynuhu ogyahay wax badan oo ku saabsan maalgelinta aasaasiga ah iyo sida ay u wajahaan shaqadooda, kalsoonidu waa la dhisay, horumarinta dhammaan qaybta deeqsinimada, faa'iidooyinka aan taageerno, iyo saameynta wadajirka ah .
Sidee McKnight Horumarinta Transparency ee Website-keeda
Ujeedada ugu muhiimsan ee shabakadda asaasiga ah waa mid caqli-gal ah oo saameyn leh. Iyada oo horumarinta webka, Visceral, waxaan isku dayeynay inaanu goobta ka dhiganno madadaalo si loo yareeyo oo aan sahlaneyno in aan u soconno sida ugu macquulsan, waxaanu ku soo aruurineynaa macluumaad si aan dadka uga caawinno ganacsi shaqo. Tusaale ahaan, waxaan hadda ku jirnaa faahfaahinta ku saabsan sida loo raadsado maalgelin, sida loo xafidayo goob kulan, iyo xitaa maalgelinta aan ka sameyno saameyn ku yeelashada maalgashiga. Waxaan sidoo kale leenahay macluumaad sahlan oo sahlan, oo sahlan oo la raadin karo, kaas oo naga dhigi kara mid ka mid ah maaliyadaha qaranka. Sida laga soo xigtay Challenge Challenge GlassPockets, kaliya hal qiyaastii 100 aasaasiga ah waxay wadaagaan macluumaadka deeqaha hadda ee internetka. Liisaska deeqaha, oo ay la socdaan sawirada ku-meel-gaadhka ah iyo vignettes goobta oo dhan, ka caawi dadka kale in ay si fiican u fahmaan howlaha ururkeena.
"... marka ay dadku ogaadaan waxa ku saabsan maalgelinta aasaasiga ah iyo sida ay u wajahanyihiin shaqadooda, kalsooni ayaa la dhisay, horumarinta dhammaanba deeqaha deeqsinimada leh, faa'iidooyinka aan taageerno, iyo saameynta wadajirka ah."
-NA ENG, MASUULIYADAHA WADAJIRKA
Intaa waxaa dheer, waxaan u imid inaan ogaado in bixinta macluumaad dheeraad ah ma aha in ay gaaraan hufnaan weyn. Waa arrin muhiim ah in la bixiyo casriyeynta saxda ah ee shaqada - taasina waxay ka dhigan tahay in la nadiifiyo boodboodka. (Tixgeli habka KonMari ee u mahad celineynin wixii qiimo ka baxsan, ka dibna la sii daayo.) Websaydhyada ka baxsan waa in aan loo isticmaalin nidaam diiwaan galin oo gudaha ah. Waxaan ogaanay in qoraalka taariikhda badanaa uu sababay wareer ku saabsan ujeedadayada iyo aqoonsigeenna. Si kastaba ha noqotee, adeegsiga cilmi-baarista, waxaynu aruurinaa warbixinno hore IssueLab, oo leh nidaam wadaag ah oo wadaag ah oo wadaag ah.
Helitaanka Dijitaalka & Luqadda Luqadda
Transparency sidoo kale waxay u baahan tahay fahamka baahida dadka dhagaystayaasha kala duwan iyo sameynta Isku-darka Digitaalka mudnaanta. Marka aan u soo bandhigno boggayaga si aad u noqoto mid aad u fiican oo loogu talagalay dadka dhagaha culus ama indhoole ah, waxaan ku wareejinay xisaabin ku-meel-gaar ah. Iyo halkii ay ku tiirsan lahaayeen qalabyada ku salaysan shabakadda, waxaan waydiisannay dadka naafada ah in ay qiimeeyaan heerka ay gaari karaan. Isbedelada ka mid ah, waxaan ku darsannay fariin muuqaal ah dhamaanba fiidiyeyaasheena, kharash yar. Waxaan tan iyo wixii ka dambeeyay ballaariyay xidhitaanka xiran in ka badan luuqado daraasiin ah, dhammaantood laga hadlayay gobolka Minnesota, oo ay ku jiraan Hmong, Laotian, Soomaali, Oromo, Carabi, Shiine, Isbaanish, iyo kuwo kale.
Dadaaladayada ku wajahan ka mid noqoshada dhijitaalka, taas oo u suurtagelisa daahfurnaanta dadka leh awoodda jimicsiga iyo luuqadaha kala duwan, waa socotaa. Weli wax badan ayaan ku baran karnaa. Waxaan hadda wax badan ka baran karnaa baahida farsamo ee dadka ku jira aagagga hooseeya ee xawaaraha hoose ee adduunka soo koraya, bulshooyinka reer miyiga, iyo xitaa meelo ka mid ah meelaha metro. Marka isgaadhsiinta digital-ka ah loogu talagalay luuqadaha Ingiriisiga ee awood u leh inay helaan internetka xawaaraha sare leh, kooxo muhiim ah ayaa laga gooyaa fikradaha iyo fursadaha aan bixino, waxaana nalooga leenahay fursad aan ku xirno dadka haysta wax badan oo gacan ka geysanaya horumarinta hawsheenna.
Jaaliyaddeena badanaa waxay u aragtaa midabtakoorka marka la eego ficillada shakhsi ahaaneed, siinta dareenka feejignaanta caqabadaha nidaamka. Kuwani waa caqabado caqli-gal ah oo la abuuray lana hayo, badanaa si aan loola dhaqmin, xitaa dadka ay ku kalsoon yihiin-sababtoo ah ma'aha ay ka warqabaan saameynta caqabadaha kuwaas oo aan ahayn iyaga oo keliya.
Websaydh hay'ad leh awood ay ku qaybiso khayraadka, abaal marinta, iyo xulashada shaqaale iyo la-hawlgalayaasha cusub waxay noqon karaan qalab loogu talagalay sii wadista ama joojinta sinnaanta. Marka aasaasku leeyahay fikrado muhiim ah oo lagu faafiyo-kiiskeena, fikradaha ku saabsan horumarinta mustaqbal, hal-abuureed, iyo mustaqbal balaadhan oo ay dadku iyo meeraha ku koraan- Websaydh ayaa ka tagi kara dadka ka dambeeya ... ama waxay dhiirrigelin kartaa dad badan si ay u hormariyaan howlgalka.
Nasiib wanaag, waxaan haynaa dhaqdhaqaaqyo sida GlassPockets annaga oo naga codsanaya in aan u dhaqaaqno si hufan, wada jir ah, iyo hufnaan waxtar leh.